Chitima Kufamba iri nyore kwazvo uye Eco-Inoshamwaridza Nzira Yekufamba. Thiri nyaya zvakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel ne Save A Train, Iwo Akachipa ezvitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Roma iguta rakakura kushanyira muEurope kwevakuru vafambi. Muguta rekare reRoma, zvinonyanya kukwezva, Hotels, uye maresitoreti anowanikwa zvakakwana kune vakuru muwiricheya. Izvi zvinoreva kuti mataundi emigwagwa yedhorobha ese ane mataera emavhiri, uye guta iro roga rakapfava, saka zvisinei neako muviri chikamu, uchaona zviri nyore kwazvo kufamba famba.
Duomo naLeonardo De Vinci's 'Kudya Kwekupedzisira' vanoita kuti Milan ive paradhiso yehunyanzvi uye vanoda nhoroondo. Kunze kwekunge iri rekuvaka gem, Milan ane hushamwari kune vafambi vakuru uye akatokunda a 2016 EU Access mubairo. Saka Milan nderimwe remaguta akanakisa kushanyira muEurope kune vafambi vakuru.
Kana iwe ukapfuura ako makumi matanhatu uye wagadzirira kugara kwakanaka, ipapo iwe uchave uine nguva inoshamisa kwazvo kuMilan. The Italian chili, ari dzinokatyamadza akitekicha of Basilicas, unyanzvi namaberere, uye mamiziyamu anoita kuti iwe unzwe sehumambo. Kana ari kuMilano, unofanirwa kubatana neiyo pasita yekubika yekubika nekuti haina kumbove yakanonoka kuti udzidze iyo yakakwana pasita sosi yekubheka kuitira kuti udzokere ku la dolce vita kumba.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Mataundi Akanaka MuEurope Ekushanyira Vafambi Vakuru” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-visit-senior-travelers%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)